Fivoriamben'ny vondron'orinasa mivezivezy sy fivarotana solika China KAISHENG PCB
Vy Coating: AZA mitondra maimaim-poana
Sosona: 2 Layer PCB
Fitaovana fototra: FR-4 TG 135
Fitaovana vy: HASL maimaim-poana Fomba famokarana: SMT + Sosona: PCB 2 sosona
Fitaovana fototra: FR-4 TG 135 Fanamarinana: SGS, ISO, RoHS MOQ: Tsy misy MOQ
Karazana solder: Tsy misy firaka Serivisy tokana: fivoriambe PCB Turnkey Fitsapana: 100% AOI / E-fitsapana / Fitsapana an-tsary
Teny lakile: Serivisy fivoriambe PCB, fizotran'ny fivoriambe PCB, Mponina PCB, mpanamboatra solika PCB
Rehefa misafidy anay ho orinasam-pifandraisana PCBA ianao dia misafidy ny hiara-miasa amin'ny serivisy manome ny tsara indrindra. Ny serivisy fivoriambe PCB dia mihaona ireo mari-pahaizana avo lenta avo indrindra ary manaraka ny fenitra IPC Class 3, RoHS ary ISO 9001: 2008-mari-pahaizana. Ho fanampin'izany, afaka miatrika karazana PCB isika, na lafiny roa na lafiny iray, tetik'asa SMT, lavaka na fivondronana mifangaro. Izay tianao atao dia azonay atao!
Hifandray aminao hatrany hatrany hatrany am-piandohan'ny tetikasa hatrany amin'ny tsipika fahatongavana izahay ary hitazona anao hatrany amin'ny famolavolana hatramin'ny famokarana ka hatramin'ny fivoriambe. Ity dia afaka manampy anao hitahiry vola sy adin-tsaina amin'ny vidin'ny PCB ambany, hanafohezana ny fotoana fiandrasana ary hanomezana vokatra avo lenta. Tianay ny mitsitsy fotoana sy hery aminao hahafahanao mifantoka amin'ny volavolanao PCB - aza manahy ny amin'ny minitrae amin'ny fizotran'ny famokarana.
PCBFuture dia mpamatsy vahaolana lehibe PCB. Azontsika atao ny mahafeno ny fepetra takian'ny PCB anao manomboka amin'ny fividianana ampahany ka hatramin'ny fivorian'ny elektronika. Hanampy anao amin'ny dingana rehetra izahay ary hanome anao fahaiza-manao feno sy toky momba ny kalitao.
Fivoriambe PCB ambany
Fivoriambe PCB antonony
Inona avy ireo rakitra sy antontan-taratasy angatahinao amin'ny PCBA?
Mila rakitra Gerber, data Centroid ary BOM izahay amin'ny baiko PCBA anao. Tahaka ny nametrahanao ny baiko PCB aminay, raha ny marina, raha toa ka ao amin'ny rakitra PCB Gerber misy ny fanontana amin'ny efijery, ny dian-by varahina ary ny sosona solder paste dia mila mandefa ny roa farany ianao. Raha tsy misy amin'ireo sosona telo voalaza etsy ambony ireo ny rakitra PCB Gerber anao dia alefaso indray izy ireo, satria io no fangatahana farafahakeliny ho an'ny PCBA. Mba hahazoana ny valiny mety indrindra, dia andefaso ihany koa ny sary sy torolàlana ary sary ho anay fivoriambe mba hialana amin'ny fametrahana ampahany tsy mazava na diso mihitsy aza, na dia tsy mila izany aza ny ankamaroan'ny mpanangona.
Ahoana no tokony hataoko kitina raha mandefa baiko marobe aho?
Kit vitsivitsy no azo alefa ao anaty fonosana iray, fa ny fonosana rehetra dia tsy maintsy asiana marika amin'ny isan'ny kaomandy
Ny ampahany ampiasaina amin'ny asa marobe dia tokony asiana marika amin'ny sticker
Hamarino tsara fa manome ampahany fanampiny 5% isaky ny kinova tsirairay
Raha mila fampahalalana bebe kokoa dia jereo ny torolàlana azonay momba ny ampahany amin'ny entana.
Manana ny matihanina PCB R&D, endrika, ekipa famokarana izahay, miaraka amina ekipa injeniera matanjaka, traikefa manankarena, mahazatra ny famolavolana tetikasa sy ny famolavolana impedance, ary natao ho anao ny mety amin'ny drafitra famolavolana. Miaraka amin'ny tanjaka matanjaka, kalitao milamina ary fandefasana haingana, dia eken'ny mpanjifa izany.
Teo aloha: Turnkey Cheap Pcb Assembly
Manaraka: Fiara fitetezam-paritra GPS Tracker Circuit GPS
Fivoriamben'ny birao fizarana fitaovana